I-china 1050 1060 1100 iAluminium Sheet coil yoMvelisi kunye noMthengisi | URuiyi
Iphepha le-aluminium le-1050 lolona hlobo luluncedo kakhulu kuthotho lwe-1000 aluminium alloy. Njengohlobo lwephepha le-aluminium emsulwa,Iphepha lealuminium eli-1050 kugqwesile ukumelana nokubola, ukuqhuba kobushushu kunye nokuqhutywa kombane. Ngaphezu, kuba inkqubo machining ilula, iindleko zokuvelisa iphepha le-aluminium ye-1050 litshiphu kunezinye iintlobo ngelixa itekhnoloji inobuchule ngakumbi. Ke, i-aluminium 1050 sheet ihlala ikukhetho olufanelekileyo lomthengi.
I-RUIYI Aluminium yinkampani enye ye-STOP Solution. Sijolise kwimveliso yepleyiti yealuminium ngaphezulu kweminyaka eyi-10. Amava ethu amade kwaye atyebileyo sisiqinisekiso sephepha le-aluminium le-1050. Ke ngoko, sinentembelo yokuba lelona liphezulu labathengisi bephepha lealuminium kubathengi bethu.
Uthotho Urhulumente Ubushushu Uluhlu lokuTyeba Uluhlu lobubanzi Ubude boBude
Iikhoyili zamaphepha e-aluminium eziyi-1050
Umbala: RAL Umbala, iSilivere, iGolden, Bronze, Mnyama, Pinki, Bomvu, luhlaza, umbala wesinyithi
Ibhrashi: Icala eliphindwe kabiniuhlambe
Ingqolowa engaphezulu: ngqoingqolowa, ingqolowa yaseNakanaga, iinkozo ezimfutshane, ukutya okuziinkozo
Ukukhuselwa komphezulu: ngefilimu okanye hayi, acc ngokuhambelana nemfuno yakho
1. Range hood kunyeulwelo lwerhasi yentsimbi
2. Ikhondomu yomoyaumxholo
3. Amanzi heater kunye calorifier
4. Tshintsha kwayelayita icima
5. Isixhobo se-elektronikiNdiyigcinile
6. Izibane nezibaneerns
7. Umdibaniso weAluminiyamIphaneli yemodeli
8. Umzi and izixhobo zasekhaya
9. Ifowuni ephathekayoiqokobhe
10. IAluminiyam frAme
12. Laminatibhodi ed
13. Sayina kunyeipleyiti yegama
14. Impahla, amatyalaneesutikheyisi
15. Ubungqina bomliloisitya
17. Iphaneli yokuhombisa imoto
Egqithileyo IiPrimiyamu zePlatinum zeAluminiyam eziHlolwe ngePlati yeePhepha
Okulandelayo: I-3003 5052 iAluminiyam yedayimani yokuNyathela iPlate
024 IAluminiyam Ikhoyili Stock
032 IAluminiyam Ikhoyili Stock
I-Coil Stock ye-Aluminium ebanzi
Ikhoyili yeAluminiyam engama-5052
Umenzi weAluminiyam yeCoil
Ixabiso le-Aluminium Coil
Umthengisi weAluminiyam coil
Umbala oDibeneyo weAluminiyam Coil
Iphepha le-Coil le-5052